🍒Casino Fastpay - Diiwaangelinta, Goobta Rasmiga ah, Xaqiijinta
FastPay Casino >Dib u eegista nidaamka diiwaangelinta casino FastPay
Dib u eegista nidaamka diiwaangelinta casino FastPay
Xeerarka diiwaangelinta casino ee khadka tooska ah
Waxay u fidisaa xayaysiis macaamiisha cusub
Nidaamka abuuritaanka koontada
Xaqiijinta Aqoonsiga ee Casino FastPay
Xiritaanka iyo"keydsho" xisaab
Sideen ku sameeyaa sharadkeygii ugu horreeyay Fastpay?
Fasaxa rukhsadaysan ee FastPay Casino waa mashruuc caalami ah oo la bilaabay xagaagii 2018. Waxay siisaa dhammaan dadka khamaarka jecel buug-gacmeed ballaadhan oo loogu talagalay dhadhan kasta - laga bilaabo ciyaaraha miisaska caadiga ah illaa jaan-goynta dhinacyada. Aad ayey u fududahay inaad macmiil u noqotid khamaarigan - diiwaangelinta ka socota FastPay casino waqti badan ma qaadato.
> Sababtaas awgeed, dadka kaliya ee ka weyn 18 sano waqtiga diiwaangelinta ayaa noqon kara macmiil khamaar.
Xeerka labaad ee muhiimka ahi waa hal xisaab. Kasiinooyinka khadka tooska ah laga mamnuuco sameynta in kabadan hal xisaab khamaar qofkiiba. Deggeneyaasha waddammada badankood ee adduunka waxay noqon karaan macaamiisha FastPay, marka laga reebo waddamada soo socda:
Boortaqiiska, Gibraltar, Faransiiska iyo dhulalkiisa dibedda;
Ciyaaraha qaarkood oo ka imanaya buugga ayaa laga yaabaa inaan laga helin dalal gaar ah.
Inta lagu guda jiro hawsha diiwaangelinta, ciyaaryahanka wuxuu ballan qaadayaa inuu barto dhammaan sharciyada qadka tooska ah oo uu kula heshiiyo iyaga. Waxaa lagugula talinayaa inaadan iska indhatirin nidaamkan, aqoonta xeerarka ayaa ka fogaan doonta khilaafaadyo badan.
Ku xad gudubka xeerarka FastPay waxay sababi kartaa koontada oo laga xannibo.
Dhammaan isticmaaleyaasha ka diiwaangashan FastPay waxay ku xisaabtami karaan gunnada ugu horreysa deebaajiga. Xaddiga ugu badan ee mushaharku waa 100 USD/EUR ama 865 NOK, 127 CAD, 130 AUD, 138 NZD, 375 PLN, 1500 ZAR, 10650 JPY, 0.01 BTC, 1.9 LTC, 0.256 ETH, 0.05 BCH, 44000 DOGE ... Qaddarka lacagaha gunnada waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo 100% cabbirka dhigaalka.
Abaalmarinta waxaa la hawlgeliyaa marka koontada dib loo buuxiyo, lambarka ogeysiiska looma baahna. Marka lagu daro, ciyaaryahanka wuxuu helayaa 100 wareegyo bilaash ah oo ku saabsan mashiinnada mashiinnada. Si siman ayaa loo xisaabiyaa - 20 wareeg oo bilaash ah 5 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda dhigaalka.
Si aad ugu beddesho lacagaha gunnada ah lacagaha dhabta ah, waxaad u baahan tahay inaad ku dhejiso sharad qaddar noqon doona 50 jeer qadarka gunnada la aruuriyay.
Fastpay waxay leedahay gunno deebaaji labaad. Waxaa lagu soo oogay qaab ah 75% lacagta dhigaalka ah. Gunnadan ayaa 2 jeer ka yar gunnada ugu horreysa ee dhigaalka.
Waad iska qori kartaa casino 'FastPay casino' goobta ugu weyn, ama muraayadeeda. Diiwaangelinta waxaa laga heli karaa kombiyuutar, taleefannada casriga ah iyo kiniiniga.
Si aad u sameysato koonto, dhagsii badhanka"Diiwaangeli". Waxay ku taal dusha sare ee goobta, midab cagaar leh. Dhagsii badhanka wuxuu kicin doonaa foomka diiwaangelinta meelaha:
ereyga sirta ah - waxaa lagugula talinayaa inaad sheegto isku darka ugu adag;
lacagta - waxaad u baahan tahay inaad doorato mid ka mid ah lacagaha la heli karo - USDT, USD, EUR, DOG, BCH, LTC, ETH, BTC, ZAR, JPY, PLN, NZD, AUD, NOK, CAD.
Dhammaan beeraha ayaa loo baahan yahay. Isticmaaluhu waa inuu sidoo kale calaamadeeyaa sanduuqa"Waan ku raacsanahay xeerarka." Marxaladda diiwaangelinta, waad iska qori kartaa liiska boostada ee xayeysiinta ah, ama iskama bixin karto. Warsidaha waxaa ku jira dalabyo xiiso leh, warar casino. Waxaad dib uga hawlgalin kartaa koontadaada gaarka ah.
Ka dib markaad gujiso badhanka"Diiwaangeli", casino wuxuu soo diri doonaa emayl leh xiriiriye cinwaanka emaylka la cayimay Waxaa looga baahan yahay firfircoonaan - isticmaaluhu wuxuu si toos ah ugu riixi karaa xiriiriyaha warqadda, ama wuu nuqulan karaa oo ku dhajin karaa cinwaanka barta biraawsarka. Haddii fariin ka socota FastPay aysan ku jirin sanduuqaaga gudaha 30 daqiiqo gudahood, waa inaad furtaa galka Spam-ka, halkaas oo fariinta laga yaabo inay si khalad ah ku heshay.
Ku shaqeynta koontadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku gasho erey sir ah iyo emayl. Koontadaada shakhsi ahaaneed, waxaad u baahan tahay inaad furto astaan ​​oo aad buuxiso macluumaadka kaa maqan ee naftaada ku saabsan. Xogta oo dhami waa inay sax ahaataa. Waad ku dari kartaa lacagaha koontada xisaabtaada - casino kuma xadidna macaamiisheeda hal lacag.
Kaliya isticmaaleyaasha la xaqiijiyay ayaa si buuxda u isticmaali kara dhammaan adeegyada casino ee khadka tooska ah. Ka bixitaanka lacagaha akoonka ciyaaraha waxaa la furaa oo keliya aqoonsiga qofka ka dib. FastPay waxay codsan kartaa xaqiijin waqti kasta, laakiin waxaa fiican inaad adigu sameyso isla markiiba diiwaangelinta ka dib.
Casino waxay damaanad qaadeysaa amniga macluumaadka shaqsiyeed. Xaqiijin ahaan, waxaad u baahan tahay inaad furto"Koontada" bogga ku jira koontadaada gaarka ah oo aad tagto qaybta"Dukumintiyada". Halkaan waxaad u baahan tahay inaad ku shubato sawir ama sawir baasaboorkaaga ah, ama dukumiinti kale oo caddeyn kara aqoonsigaaga. Sawirka waa inuu noqdaa mid tayo wanaagsan leh.
Kaab ahaan ku darida baasaboorka, waxaad u baahan kartaa cadeyn bangi, qaansheeg lagu bixiyo isgaarsiinta, iyo wixii la mid ah. Dukumiintiga waa inuu lahaadaa xarfo hore oo u dhigma baasaboorka. Muddada ugu badan ee hubinta dukumiintiyada la diray waa 24 saac. Kasiinadu waxay xaq u leedahay inay codsato dukumiintiyo dheeri ah, fiidiyoow ama wicitaan taleefan.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan aqoonsiga shaqsiyeed, ciyaartoydu way la xiriiri karaan taageerada. Waxay shaqeysaa 24/7 waxaana lagu heli karaa sheeko toos ah iyo emayl.
Macaamiisha casino tooska ah ee FastPay waxay xaq u leeyihiin inay tirtiraan akoonkooda ciyaaraha waqti kasta. Koontada waa lagu xiri karaa adiga oo la xiriira kooxda taageerada.
Haddii laacib uusan galin akoonkiisa gaarka ah muddo 6 bilood ah, uusan dhigin wax khamaar ah isla markaana uusan dhigin wax dhigaal ah, ka dib koontadiisa ayaa la hakinayaa. Xisaabinta akoonku maahan xirid, dib ayaa loo howlgelin karaa.
Waxaad ku dhejin kartaa sharad khamaarka isla marka diiwaangelinta kadib. Lacagta ayaa isla markiiba la xisaabiyaa. Qadarka ugu yar ee dhigaalka waa 0.01 BTC, 14 NZD, 10 EUR/USD, 37 PLN, 13 CAD, 4400 DOGE, 0.2 LTC, 13 AUD, 151 ZAR, 0.05 BCH, 1060 JPY, 0.025 ETH, 87 NOK. Kasiinadu wax lacag ah kama qaaddo wax buuxinta, laakiin waxaa dejin kara nidaamka lacag bixinta.
Ka dib marka lacagta la qoondeeyo, waxaa harsan xulashada ciyaarta ku habboon. FastPay waxay bixisaa si loogu ciyaaro mashiinnada ciyaarta, ciyaaraha miiska, Live casino oo leh ganacsato nool. Guud ahaan, in ka badan 1000 kulan ayaa laga heli karaa goobta. Qalabka mashiinnada waxaa lagu sii tijaabin karaa qaab bilaash ah. Waxaa jira boosas gooni ah oo loogu talagalay sharadka loo yaqaan 'cryptocurrency'.
Dhamaan macaamiisha cusub ee casinos-ka khadka tooska ah waxay si toos ah xubno uga noqdaan nidaamka daacadnimada. Qodobbada waxaa lagu abaalmariyaa isticmaalka firfircoon ee adeegyada FastPay. Waxay go'aamiyaan heerka ciyaaryahanka barnaamijka daacadnimada. Heer waliba waxay siisaa mudnaanteeda. Tusaale ahaan, ciyaartoyda leh heerka labaad iyo kan sare ee casino waxay bixiyaan hadiyad dhalasho.
Dhibcaha la soo ururiyey ama qodobbada xaaladda ayaa lagu beddeli karaa lacag dhab ah. Waxaad sameyn kartaa isweydaarsi sanadkiiba mar - usbuuca ugu dambeeya ee Diisambar.
Diiwaangelinta FastPay waxay u fureysaa fursado aad u wanaagsan taageerayaasha mashiinnada ciyaarta iyo ciyaaraha kale ee khamaarka. Way fududahay inaad iska diiwaangeliso goobta - waxaad u baahan tahay oo keliya inaad buuxiso foom gaaban. Kasiinadu waxay codsaneysaa aqoonsi si loo xaqiijiyo aqoonsiga - tani waa nidaam caadi ah dhammaan casinos-ka sharciyeysan ee internetka